Fanangonana tahirin-kevitra momba ny mety hisian’ny sivana amin’ny tranonkala any Venezoela · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra Adriana Gutiérrez Nandika (en) i Silvia Viñas, Liva Andriamanantena
Voadika ny 20 Avrily 2019 3:28 GMT
Vakio amin'ny teny English, English, Français, polski, বাংলা, Español
(Marihina fa tamin'ny volana Febroary 2014 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Nanao antso tsy tapaka tao amin'ny kaontiny Twitter i Marianne Díaz, mpisolovava, mpikatroka nomerika ary mpanoratra ato amin'ny Global Voices Advocacy, nangataka ny mpisera mba hiara-hiasa amin'ny fanangonana tahirin-kevitra mifandraika amin'ny fahafahana miditra amin'ny tranonkala sy ny sehatra an-tserasera sasany avy amin'ireo mpamatsy tolotra aterineto any Venezoela, noho ny fitomboan'ny tatitra mikasika ny fanakànana amin'ny amampahany na iray manontolo ny votoaty sy ny tolotra an-tserasera.
Manana fotoana malalaka ve ianao? Ampio aho hizaha raha toa ka azo hidirana any amin'ny toerana izay misy anao ireo tranonkala ato anatin'ity lisitra ity.
Nandrisika ny mpisera ao Venezoela izy, sy ireo izay afaka manandrana miditra amin'ny tranonakala amin'ny alàlan'ny proxy, mba hitatitra ny zavatra hitany tao amin'ny Herdict, tetikasa an-tserasera iray izay manangona sy mampiseho amin'ny fotoana mivantana ny vaovao hiombonana momba ny sivana an-tserasera.
Mihevitra i Marianne fa zava-dehibe tokoa ny fametrahana miaraka izany karazam-baovao izany amin'ny toe-draharaha misy ao Venezoela. Taorian'ny nahafatesan'olona miisa telo nandritra ny hetsi-panoherana tamin'ny 12 Febroary 2014 dia nitohy nanerana ny firenena ny fihetsiketsehana sy ny fifandonana teo amin'ireo mpanao fihetsiketsehana sy ny mpitandro filaminana. Nilaza i Marianne fa “porofo ny angondrakitra, ary matanjaka kokoa noho ny hevitra ny porofo .”